Tube Mill & Pipe Oomatshini abavelisi - China Tube Mill & Pipe Machinery Factory kunye nababoneleli
Umda wokusika kubude obusetyenziselwa ukutyibilika, ukulinganisa kunye nokusika i-coil yesinyithi kubude obufunekayo beshiti ecwangcisiweyo kunye nokufaka isitaki.Ifanelekile ukuba kusetyenzwe kubanda okuqengqelekileyo kunye nesinyithi esishushu esisikiweyo, i-coil, i-coil yentsimbi ehlanganisiweyo, i-coil yesinyithi yentsimbi, Ikhoyili yentsimbi, iikhoyili zealuminiyam njl njl.
Zenzekelayo High-Speed ​​uqhoqhoqho umatshini isetyenziselwa iikhoyili eneenkcukacha ezahlukeneyo, ngokungatyibiliki, ukulinganisa, kunye nokusika ubude kwipleyiti ecabaleleyo njengoko kufuneka ubude nobubanzi.
Lo mgca usebenza ngokubanzi kumzi mveliso wokulungisa ipleyiti yesinyithi, njengemoto, isikhongozeli, isixhobo sendlu, ukupakisha, izinto zokwakha, njl.
Umbhobho wokwenza umbhobho wokwenza umbane ongenasici
Sengenantlonelosteel Pipe Ukwenza Machine Series ubukhulu becala kusetyenziswa kwimveliso kumbhobho zentsimbi mveliso-stainless. Njengoko welding zophuhliso umbhobho technology, insimbi umbhobho welding, endaweni umbhobho ingenamthungo kwiindawo ezininzi (ezifana imichiza, zonyango, iwayini, ioli, ukutya, imoto, conditioner umoya, njl)
I-ERW Tube kunye noMatshini wokugaya umbhobho Uthotho zizixhobo ezizodwa zokuvelisa isantya esiphakamileyo esithe nkqo esine welding ityhubhu kunye netyhubhu yombhobho wesakhiwo kunye nombhobho wamashishini kunye Φ4.0～ Φ273.0mm kunye nobukhulu bodonga δ0.2～12.0 mm. Umgca uphela unokufikelela kukuchaneka okuphezulu kunye nesantya esiphezulu yoyilo lokusebenziseka, ukukhetha izinto ezifanelekileyo, kunye nokuqamba ngokuchanekileyo kunye nokuqengqeleka. Ngaphakathi kuluhlu olufanelekileyo lombhobho kunye nobukhulu bodonga, isantya semveliso yombhobho sihlengahlengiswa.